Kingsoft Office 2013 fandikana Espaniola | Avy amin'ny Linux
Raha mampiasa ianao Biraon'ny Kingsoft 2013 Afaka manampy amin'ny fandikan-teny ianao satria mora be.
1.- Tsy mitarika ny Community WSP aloha izahay:
Ny pejy dia ao amin'ny Github, any no hahitantsika ireo fonosana sy fisie izay ataon'ny fiarahamonina WPS ho an'ny fiteny tsirairay.
2.- Mila misintona ny lahatahiry isika amin'ny fiteny anglisy amerikana (en_US) sy ny teny Espaniôla (es).
Tamin'ny mena dia nasongadiko ilay lahatahiry ny teny anglisy anglisy.
Tamin'ny loko maitso, nasongadiko ny lahatahiry amin'ny teny Espaniôla, izay adikan'ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina Meksikana. Hijery sary.
Avy eo izahay dia manao kopian'ny teny anglisy anglisy (en_US). Ampidiro ao Etazonia ny fampirimana.
Avy eo dia ampidirintsika ny folder TS izay marihina amin'ny mena.
Rehefa ao anatiny dia ho hitantsika ireo rakitra tsy maintsy adika amin'ny teny Espaniola:
Misintona ny rakitra tsirairay avy izahay ary avy eo mandika azy ireo.
Avy eo dia ampidininay ny fampirimana fandikana ny fiteny Espaniola. Tamin'ny loko maitso dia nasongadiko ny lahatahiry ny teny Espaniôla.
Rehefa ao anatiny dia ho hitantsika ireo rakitra mitovy fa ny sasany tsy feno dia adika amin'ny Espaniôla:
Andao jerena ny ohatra iray amin'ny fandikan-teny
Andao hojerentsika ny rakitra amin'ny American English:
Andao jerena ity rakitra ity fa amin'ny teny espaniola:
Rehefa mampitaha ireo fisie dia miharihary fa ilay fisie ktreasurebox.ts Ho an'ny fandikana ny teny Espaniôla dia maro ny andalana fandikan-teny tsy hita.
Ireo tsipika tsy hita izay tsy maintsy apetrakao ao amin'ny fisie ktreasurebox.ts amin'ny Espaniôla. Raisina ny fandikan-teny anglisy anglisy
Ny fandikana ny tsipika kaody dia tena mora. Ohatra, tsy maintsy mandika isika:
Vata fandoavana = Chest Treasure
Avy eo raha vao sintonina ny lahatahiry miaraka amin'ireo rakitra ho an'ny fiteny tsirairay, dia afaka manomboka amin'ny fandikan-teny isika.
Afaka mifandray amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina WPS izahay mba hitatitra ireo fandikan-teny nataonay, afaka mifandray amin'ilay tompon'andraikitra amin'ny fandikanteny izahay.
Niresaka tamin'ny mpampiasa maromaro aho, ny sasany izay mahay anglisy dia nanolo-tena hanampy amin'ny fandikana ny Kingsoft Office 2013.
Ny hevitro dia ny hiasa amina vondrona iray amin'ny fandikana. Avelako ny mailako sao misy mpampiasa liana hanampy amin'ny fandikan-teny: marianocordobario3 [at] gmail [dot] com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Fandikana espaniola ny Kingsoft Office 2013
Tena tsara. Amin'izao fotoana izao dia ho azo atao ny mandika ny Office Kingsoft amin'ny teny Espaniôla.
moray33 dia hoy izy:
Tany am-boalohany dia "es_MX" ilay fandikan-teny ary novana marina izy io ho "es" satria nanolotra ny mpamorona aho mba hiara-miasa amin'ilay mpandika teny rehetra ny Espaniola. Izaho koa dia niara-niasa tamin'ny fandikan-teny fa tsy Meksikana fa Espaniola, ka te-hanao an'io naoty kely io aho.
Mamaly an'i moray33
Etsy ankilany, misaotra tamin'ny fampahafantarana ity asa ity, fandikana lehibe tokoa izy io ary arakaraka ny hamaron'ny olona kokoa no hahavitana azy io.
Ary manoro hevitra aho ny hampiasa ny Qt Linguist (tafiditra ao amin'ny qt4-dev-fitaovana) hanovana ireo rakitra .ts, ahazoana aina kokoa sy vokatra kokoa izy io.
Mampiasa Gedit aho ary tsy nanana olana.
Azonao atao ny mifandray amiko .... misy olom-pantatro izay monina any Etazonia aho ary te hanampy amin'ny fandikan-teny.
Niresaka tamin'izy ireo aho. Ny adiresiko ao amin'ny Google plus dia: https://plus.google.com/104109746841092570517/posts
Ny mailako dia: marianocordobario3@gmail.com
Azafady mba tsy fahano ity rindrambaiko tompona ity. Mandraisa anjara bebe kokoa amin'ny LibreOffice izay mila izany ary maimaim-poana.
Manome sary masina ho an'ny
Ny mpanjifany dia tsy nitady ny fanampiako… .. momba ny kaody sy ny hevitra omeko koa ny ahy… ..
Saingy nahazo tsia ny feo avo avy amin'ireo mpamorona LibreOffice.
Nifamaly tamin'ny Tor Lillqvist aho… ..
Mampalahelo fa i Tor sy Caollan Mc Namara dia manana toe-tsaina Retro HackFest izay samy miasa amin'ny tetikasa Gnome ary ho an'i Red Hat ary ho azy ireo dia tsy ilaina ny estetika, dia ataon'izy ireo mahatsiravina toy ny sary masina Gnome.
Izany no antony itohizan'ny LibreOffice miaraka amina interface Office 2003.
Tsy mampaninona ireo mpamorona LibreOffice ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa …… Izaho sy ny olona maro dia mandefa kaody sy hevitra, saingy tsy miraharaha izay hevitra avy any ivelany izy ireo.
Mino fotsiny izy ireo fa ny LibreOffice dia tsara kokoa noho ny suite hafa satria loharano misokatra izy io, sokafy ho an'ireo izay raha tsy misy API na boky torolàlana ho an'ireo mpamorona hafa hianarana fandaharana ny LiberOffice banga.
Ny mino fa tsara kokoa ny LibreOffice satria loharano misokatra dia fanararaotana na chicana mora vidy tokoa.
Ny hany zavatra heveriko fa azonao atao dia ny mandroso hatrany miaraka amin'ireo sary masinao sy ny hevitrao, farafaharatsiny azoko atao ny mikarakara ny fametrahana ireo tambajotra DL eo anilanao hanaparitaka izay rehetra ilainao, ary misalasala aho fa hanohitra izany i Elav na i Kzkg ^ Gaara.
Mikasika ny KSoffice, tsy tompona vola ve izy ireo ary mahazo vola amin'ny kinova voaloa? Malahelo, mandoa mpandika teny avy eo, mora be ny milaza hoe "hoy ny fokonolona, ​​ampio izahay maimaim-poana, avy eo mandoa ny kinova PRO an'ny dikanteninao ary tsy ho hitanao mihitsy ny kaody momba ny vokatra;)".
Tsy manohitra ny KSOffice aho, fa raha tsy te hampiasa ny fiarahamonina amin'ny tetikasa mihidy mazava dia tsy rariny. Raha ny marina dia zavatra mitovy amin'izany no nitranga teto Venezoela niaraka tamin'i Vtelca; Amin'ny ankapobeny dia hetsika iray SL no nandefasan'izy ireo amina fivoriana nakatona nefa tsy nilaza ny antony.
Taorian'ny nanangonana azy ireo dia nangatahana tamin'ny ankapobeny izy ireo hanao mpamily hahafantatra ny fihetsika sy hikasika hetsika amin'ny All-in-one izay tian'izy ireo hatao miaraka amin'ny Canaima Linux, fa maimaim-poana.
Hey, ahoana no hataontsika?
Tsy hainay fa mila manampy anay ny vondrom-piarahamonina
Ahoana raha omen'izy ireo birao misy milina fitiliana izahay hahafahanay miasa, ary omen'izy ireo anay ny fotoana tian'izy ireo hiasantsika?
Tsy manana teti-bola amin'izany izahay ary 6 volana ihany no ananantsika
Ahm, tsara raha izany, ireo mpandrindra telo ireo, dia toy izany koa, mengan ary maharitra, no mpandahatra fandaharana tsara indrindra eto, ary mandray anjara amin'ny kernel Linux aza izy ireo, manome ny masinina ho azy ireo, mandahatra ny zava-drehetra ary avelany ho fandoavam-bola. esory izy ireo
* Nitsangana ny rehetra ary lasa *
Famaranana? Tsy adala ny fiarahamonina, mandany fotoana ary raha manohana zavatra izy ireo dia zavatra azon'izy ireo araraotina na afahana ... na izy roa.
Tsy fantatro fa nitranga izany, oviana izany? haha heverin'izy ireo fa satria vtelca mivarotra amin'ny vidiny mirary dia tsy maintsy omenao azy ireo ny asa ?? .. haha ​​nampihomehy ahy izany.
Toa tsy fantatra ianao na miaina anaty rahona… .. google kely momba ity suite ity teo aloha…. opine ??
Miresaka amin'i nano aho momba ireo olona avy any Vtelca, orinasa “Socialista” Venezoeliana. Tsy momba na inona na inona momba anao, koa miezaha ho namana malala kokoa. Angamba izany no antony tsy naneken'ny mpanamboatra LO ny fangatahanao.
Miala tsiny aho fa diso ny fahazoako ny valiny, izay natao ho an'i Nano….
Tsy manome lanja ireo fangatahana izy ireo…. Satria izy ireo dia tsy liana amin'ny fanatsarana na famolahana ny endrika hita maso amin'ilay suite. Tsy manana olana amin'ny fanoratana GUI iray manontolo aho.
Saingy tsy mendrika izany satria tsy noraisin'izy ireo ny kaody.
Mikasika an'i Vtelca, mazava ho azy fa tsy hanome anarana anao aho, saingy fantatro fa betsaka ny olona noho ireo hetsika SL izay karakaraiko miaraka amin'ny vondrom-piarahamoniko na ireo izay manasa anay manerana ny firenena (FudCon, sns.), Maro amin'izy ireo manana fifandraisana matanjaka amin'ny CNTI sy ny governemanta (raha tsy eken'izy ireo fa zavatra hafa) ary tamin'ny fihaonantsika farany dia notantarain'izy ireo tamiko ny tantara, tamin'ity taona ity.
Tsy mila anarana aho, misaotra. Raha ny fanasan'i nano ny hetsika eto Maracaibo dia very ny olon'ny Velug
Tsy manao na inona na inona koa ny vahoaka GLug, mpikambana mavitrika 3 fotsiny isika, izay izaho irery no programmer.
Nandika andalana vitsivitsy fotsiny i Nano, amiko tsy misy dikany izany.
Tsy manome andalana 5000 an'ny kaody Qt na Java ho an'ny tetik'asa Kingsoft Office izahay.
ary isika rehetra ao amin'ny vondrom-piarahamonina WPS dia mpampiasa ny kinova maimaimpoana ao amin'ny Office Office Officeoft, ireo izay manao ny asa fandikana amin'ny teny Espaniôla, dia mandray an-tanana ny asanay izahay.
Aza manantena fiovana lehibe avy amin'ny LibreOffice ary aza mangataka suite iray izay manolotra fampidirana feno amin'ny birao Gnu / Linux.
Satria voafetra ny hevitra sy ny kaody ampiharina (Tranon-trano VCL ao an-trano).
Averiko ihany fa tsy hilaza afa-tsy ny hampiasanao azy ireo mpamorona satria loharano misokatra ary tsara kokoa noho ny Apache OpenOffice izany.
Tsy milaza aho hoe tsy mandeha ny LibreOffice, saingy voafetra ary hitohy ho toy izany mandritra ny taona vitsivitsy indrisy.
Qt, Gtk, Python Ruby, sns dia manana ny API sy boky torolàlana ho an'ny mpampiasa sy ny zaza vao teraka.
Ny tranomboky VCL an-trano dia tsy manana boky torolàlana na API.
Tsy tiako mihitsy hoe tsy mamaly anao ny mpamorona, rehefa te hanampy ianao.
Mino aho fa ny Kingsoft Office dia afaka mandoto ny fitsarana na ny tsena babo izay ananan'i Office ankehitriny, eny fa na dia ny mangalatra mpampiasa sasany amin'i Microsoft aza, milalao maloto amin'ny alàlan'ny fakana tahaka ny RIBBON. Ny fanaovana fifaninanana sarobidy indrindra, toa ny ataon'ny Microsoft ihany, lalao ratsy.
Raha mijery azy amin'ny fomba fijery hafa, hoy i Linus Torvalds.
Tsy nisalasala nandray an-tanana ny fidiran'i Valve i Linus. Mila ny fanohanan'ny orinasa toa ny Valve sy ny Freeware izahay mba hahafantaran'ny olona eran'izao tontolo izao ny rafitra fiasan-dry zareo raha tsy izany dia tsy hihoatra ny 2% na 3% ny mpampiasa eto amin'ny tontolon'ny solosaina, tsy te-hahita ny GNU / Linux mijanona aho .
Tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra tsara isika hanaparitahana ilay hevitra hoe ny GNU / Linux dia ampiasain'ny mpampiasa 2% na 3% eto amin'izao tontolo izao fotsiny.
Tsia, tsia, aza mieritreritra fa mpankafy LO koa aho, ny tena marina dia tsy ampy zavatra maro izy io, na dia tsy nanao zavatra tsara ho ahy aza i KSO ary mbola tsy mifangaro firy, fa raha Te hanandrana aho hahitako ny haavon'ny fampiasana azy.
Miaraka amin'ny LO nataoko ny tatitra momba ny asa aman-draharaha nataoko, dia heveriko fa KSO na Calligra ho an'ny thesis, izay mavesatra kokoa, saingy raha tsy misy fandikan-teny Espaniôla ao amin'ny rakibolana, hitako fa tsy azo atao ny mampiasa ny voalaza etsy ambony satria misy lesoka amin'ny rantsan-tànana handoavana ahy. ny kilasy famaranana, ary ny fanitsiana takelaka dimampolo mahery amin'ny "peeling eye" dia tsy dia tsotra loatra.
Eny, farafaharatsiny mba efa fantatro ny anton'ny interface interface LO, raha mifanerasera akaiky amin'ny olona ianao izao, satria tsy misy safidy hafa ankoatry ny fiaraha-miasa amin'ny «birao sinoa», dia nahita rakitra vitsivitsy tao amin'ny repo Github sy teo aho mbola zavatra tsy hita no adika ho fototra toy ny loko sasany.
Tsy mandainga aminao aho CAT, namolavola ny sary masina 16 × 16 ho an'ny sidebar ianao ary te hanampy fotsiny ilay mpitety tranonkala LibreOffice. Tsy nisy na iza na iza tamin'ny mpamorona endrika namaly ahy, fa ny mpitantana ihany no namaly.
Betsaka ny olona nanolotra kaody sy hevitra ho an'ny interface.
Ohatra, Adriano Afonso Breziliana,
Nandefa ny hevitro aho tamin'io fotoana io
Milaza aminao ireo mpamorona fa tsy mandeha izy io na milaza aminao izy ireo fa hisy fiovana lehibe eo amin'ny sehatry ny sary, ary avy eo dia mandika ny Apache OpenOffice fotsiny.
Rehefa manontany momba ny fomba fandaharana amin'ny tranomboky VCL (vita an-trano) ianao dia tsy hamaly anao ireo mpamorona, rehefa te hanampy ianao.
Mariano, voalohany indrindra dia miarahaba anao aho noho ny asa tsara nataonao. Ireo sary masina nampitondrainao dia toa tena kanto sy matihanina amiko, ary tena fanararaotana tokoa ny fanesoana.
Tahaka ny ankamaroan'ireo izay naneho hevitra teto, azafady indrindra fa tsy afaka ampiasain'ny tetikasa maimaimpoana izany ezaka rehetra izany, toa ny LibreOffice.
Miala tsiny ihany koa aho fa mora kokoa na manentana kokoa ho anao ny fiaraha-miasa amin'ny tetikasa tsy miankina fa tsy amin'ny tetikasa maimaimpoana.
Tena fako fa misy olona manana ny talentanao miafara amin'ny fandikan-teny ho an'ny trano birao fananana.
Manantena aho fa afaka nanao ny feontsika tamin'ny mpamorona LO ireo ny vondron'olona mpampiasa LibreOffice. Farafaharatsiny mba hahamora ny fampidinana sary masina hafa. Manantena aho fa ny sasany amin'ireo mpaneho hevitra dia hahita fomba hanampiana ny tolo-kevitrareo, ho tombontsoan'ny LO sy ny mpampiasa azy.
Etsy ankilany, tsapako fa amin'ny hazakazaka suite suite, ny rindrambaiko maimaimpoana dia taraiky any aoriana any aoriana any. Androany isika dia mila manana safidy hafa maimaimpoana amin'ny google docs, izay ahafahantsika miasa miaraka amin'ireo antontan-taratasy sarotra amin'ny fomba fiaraha-miasa, eny fa na dia avy amin'ny fitaovana finday aza, ary manaja ny fiainantsika manokana.
Mahatsiaro ho lavitra an'izany isika.
Nisoratra anarana tamin'ny lisitra maimaimpoana aho, ary nihevitra aho fa nolavina ny sary masinao noho ny olan'ny fahazoan-dàlana tsy voavaha, tsy noho ianao nolavina. Ankehitriny ny LibreOffice 4.2 dia manana sary masina Sifr vaovao, aza miampanga ny olona ho tezitra
Aza manao fanboy toy izany ary Fitoschido mpanararaotra, miaro ny tsy azo arovana ianao.
Milaza ny marina amin'ny olona manana porofo aho, izay nasehoko tamin'ny rohy. Tsy mpanohitra aho.
Ny kisary Sifr dia tsy feno izay fantatry ny mpampiasa LibreOffice rehetra, na ny sary Sifr ho an'ny LibreOffice 4.2 aza dia tsy feno.
Ary tsy te-hametraka ny sariko aho, manoloana ny fahazoan-dàlana no nanovako ny fahazoan-dàlan'ny kisary nataoko ho ilay fahazoan-dàlana natolotry ny Michael Meeeks ahy, programmer iray izay hajaiko satria nanao ny marina tamiko izy, nanoro ny fahazoan-dàlana MPL 2.0 izy.
Nataoko mazava tsara hatramin'ny voalohany fa ny tanjoko dia ny hanampy ny tetikasa amin'ireo sary masina tsy hita ho an'ny tetikasa Sifr. Indrindra miaraka amin'ireo sary masina 16 × 16 izay tsy hita ny browser na ny sidebar.
Avelao aho hanazava fa ny sary Sifr (kisary fisaka) dia toa tsara.
Miarahaba an'i Issa Alkurnas aho ary mirary ny soa ho azy. Fa i Mirek dia bandy tsy mahalala fomba manohitra ny hevitry ny developer hafa.
Marco Sumari dia hoy izy:
Tetikasa iray misy ny interface ribon mifototra amin'ny libreoffice no efa nivoaka fa ho an'ny windows fotsiny aloha io :(, tsara, antenaina indray andro any fa ho raisin'ireo mpandraharaha libreoffice izany. http://www.neoteo.com/merge-word-2014-procesador-de-texto-basado-en-libreoffice/
Valiny tamin'i Marco Sumari
Karel dia hoy izy:
"Aza fahanana ity rindrambaiko manokana ity" ... bls, blah, bla. Azafady, raha mandeha tsara kokoa noho ny libreoffice io, dia azo atao. Ny tokony ho tadiavina dia ny fahombiazana sy ny fampifanarahana izay mametraka aoriana be dia be ka te hifindra monina any amin'ny GNU / Linux.
Valiny tamin'i Karel
Miombon-kevitra aminao marina aho, ny fehin-kevitra tonga amin'ny injeniera maro dia ny hoe tsy misy tonga lafatra ny rindrambaiko maimaim-poana na ny tompony ary samy tsy maintsy mifameno izy roa, tokony hatsahatra ny fanatisme.
KO dia tsy mifanentana kokoa noho ny LO dia hoy izy:
Fa ny marina dia ny Kingsoft Office:
- tsy mampiseho endritsoratra tsara
- mihantona tsy tapaka
- tsy misy dikany ny fandikana amin'ny teny espaniola
- tsy manohana opendocument
- Tsy maimaim-poana fa mangataka amin'ny fiarahamonina mba hanao ny asa mafy ho an'ny pin
- tsy miova avy any amin'ny birao tsaratsara kokoa noho ny libreoffice (na firy na firy ny mifanohitra amin'izany naverina im-arivo)
Ny famaliana ny KO dia tsy mifanaraka kokoa noho ny LO
Maninona raha manampy zavatra nakatona ?. Tsy misy lojika na antony mahatonga izany.
Marina indrindra. Raha tsy haiko ny fepetra hampiasan'izy ireo ny vokatry ny androko dia tsy hiara-miasa amin'izy ireo aho.
«» »» »» "Raha tsy fantatro amin'ny fepetra hampiasan'izy ireo ny vokatry ny androko dia tsy hiara-miasa amin'izy ireo aho." »» »».
Amin'ny firy ??? . Raha tsy hiara-miasa ianao na izany na tsy izany. Fantatry ny rehetra fa mpampiasa LibreOffice ianao izay mivadika ho:
Ny anjaran'ny automatisation birao tsy miankina amin'ny Linux dia ny maimaim-poana na amin'ny hacked .. Nefa toy ny zavatra rehetra iaraha-miasa, na iza na iza te hiara-miasa na izay tsy manao, dia tokony hangina, na dia tsy hitako manokana aza ny heviny.
Ho fanampin'izay, raha manohitra an'i LO ianao, dia afaka mandray anjara amin'ny Calligra fa na dia tsy be aza izany ... betsaka ... miasa miaraka amin'ny QT izany ary miady hevitra ianao, natao ho an'ny antontan-taratasy ve izany ??, afaka manohana maimaimpoana foana ianao rindrambaiko.
Eto aho milalao miaraka amin'i Mariano huh.
Libreoffice dia nilaza fa misokatra izy, saingy fanonofinofy fotsiny, na teknikan-teknika mihoatra noho ny forona fotsiny.
Tsy misy ilana azy ny fanaovana programa miaraka amina tranomboky sy kaody tanan-tanana tsy azon'ny olombelona hafa ankoatry ny mpamorona. Mitovy amin'ny fanaovana kaody loharano mihidy io. Mitovy… toy ny sakana par para IP. Mitovy ny vokany: tsy misy olona manatevin-daharana ny kaody anao, tsy misy olona mandoka izany, tsy misy mahatakatra, tsy misy mandray anjara.
Raha ampianay amin'izany fa rehefa te-handray anjara ianao dia avoakany ny fikororohany ... buah, tsy misy afa-tsy ny marika ihany ny manokatra.
Kingsoft WP Office, etsy ankilany, tsy mamaritra ny tenany ho loharano misokatra (ary tsy fantatsika ny kaody loharanom-pahalalana ny programa), fa na eo aza izany dia mifandray bebe kokoa amin'ny vondrom-piarahamonina mpampiasa noho ny libreoffice hatramin'izay. hatramin'ny nanombohako nampiasa azy io. (~ 8 taona sahady? Fuuuu), noho izany dia mampidi-doza ny fitsarana "a priori". Mifanohitra amin'izany, farafaharatsiny, raha mikasika ireo mpampiasa te-hiasa, Kingsoft dia misokatra kokoa noho ny Libreoffice. Lavitra. Lavitra be.
«Kingsoft dia misokatra kokoa noho ny Libreoffice. Lavitra. Lavitra be."
Phew, teny mahery.
Amin'ny maimaimpoana dia mety ho lasa pedantic toa ilay mpiara-miasa izy ireo (toa tsy ho ahy manokana), fa raha miresaka objectivity isika ... amin'ny libreoffice, fa ovao ny sary masina ho an'ireo an'ny marianogaudix tsy misy olana (ho an'ny fampiasako manokana na izay mametraka izy ireo)
Ao amin'ny Kingsoft iza no "misokatra kokoa" azonao atao ny manova ireo sary masina?
Ao amin'ny LibreOffice dia tsy azonao ovaina ny sary masina …… izay no fahamarinana….
ny hany zavatra ataontsika dia ny manolo ny sary_crystal na fonosana sary_human …… izany hoe esorinao ny atiny tonga tampoka ao amin'ny LibreOffice…. Mba hanovana ireo sary masina ao amin'ny LibreOffice dia mila atao amin'ny alàlan'ny terminal ianao ary tsy mora ho an'ny newbie izany.
Raha hanova ny sary masina ao amin'ny Office of Kingsoft dia mila mahita ny lahatahiry misy ireo sary masina Sinoa fotsiny ianao ary manova azy ireo amin'ny alàlan'ny terminal …… tsy misy hafa amin'ny zavatra ataonao ao amin'ny LibreOffice rehefa manova ny sary masina ianao.
Niezaka ny nametraka ireo kisary nataonao tao amin'ny LibreOffice aho ary mandeha izany, noho izany tsy misy fahamarinana ara-kevitra azafady.
Voasolo ireo fonosana ireo ary tsy vita amin'ny tsindry iray dia raharaha misaraka. Ny tiana holazaina dia ny fahazoan-dàlana omen'ny fahazoan-dàlana, raha misy olona te hamorona installer LibreOffice miaraka amin'ireo sary masina, ampidiro ao amin'ny AUR (ohatra) ary tazomy izy ireo raha mbola tadiaviny, tsy misy olana.
Azo antoka, miaraka amin'ireo rindrambaiko manana ny sariny ao anaty fampirimana ary tsy voangona ho loharano "Afaka" manova azy ireo aho, fa ny manandrana manao izany amin'ny risika rindrambaiko tompona farafaharatsiny mahazo mailaka "ajanony ary atsaharo".
Ka ny fanehoan-kevitra iray izay "misokatra kokoa" dia tsy mifanaraka.
Ny antony anaovako fiaraha-miasa dia ny fanampiana ny olona mampiasa ny Kingsoft Office ary ny fantatry ny kernel GNU / Linux (ho an'ireo mpampiasa vaovao), amin'ity fomba ity dia ho fantatra bebe kokoa ireo hevitra momba ny rindrambaiko maimaimpoana.
Ireo mpamorona LibreOffice dia hilaza aminao fa tsy hahita fiovana mahery vaika ianao ao amin'ny LibreOffice izay no fahamarinana.
Manaiky ny toerana misy an'i Linus Torvalds aho.
Tsy nisalasala nandray an-tanana ny fidiran'i Valve i Linus. Mila ny fanohanan'ny orinasa toa an'i Valve sy Freeware izahay mba hahafantaran'ny besinimaro fanta-daza ny rafitra fiasan-dry zareo raha tsy izany dia tsy hihoatra ny 2% na 3% ny mpampiasa eto amin'ny tontolon'ny solosaina, tsy te-hahita ny GNU / Linux mijanona tampoka aho.
misy karazana rakitra hafa azonao iaraha-miasa izay somary tsotra kokoa, izay anaovana ny fandikan-teny ary novaina ny tag fandikan-teny. Amin'ny ankapobeny dia loko sy zavatra tsotra izy ireo, ka izay rehetra maniry sy manam-potoana kely dia afaka manampy.
Alefaso tsara Mariano 🙂
pucha nofafako ireo tags: a said ...
bah! .. tsy vita vita, ao anaty fononteny fokin.
darcloni dia hoy izy:
Mahaliana ny fifanakalozan-kevitra navoakan'ity lohahevitra ity, feno rehareha ahy ny mahita fa maro ny Venezoeliana mandeha mamaky an'ity tontolo goavambe misy rindrambaiko malalaka ity.
Ny fanontaniako ho an'ireo izay maneho hevitra eto dia ireto manaraka ireto: Firy ny biraon'ny birao misy amin'izao fotoana izao tsy miankina na maimaim-poana izay tena mampanahy an'i M $? Ary raha misy izany, inona no azo atolotra ny mpampiasa te hiasa miaraka aminy?
Ny fahitako ny fanetren-tena dia ny WPS KSOffice na izay iantsoana azy dia maneho ny safidy hafa na dia tsy malalaka tanteraka aza izy io dia safidy tsara.
Miaraka amin'ny fandrosoana ananany, hoy aho hoe volana maromaro vao hahita valiny isika, amin'ny ampahany dia hanery an'i M $ handinika kinova freeware amin'ny suite-ny io ary ny mponin'i LO no hampieritreritra azy, satria ny zava-misy ny fahaverezan'ny mpampiasa anao dia mahatonga anao hieritreritra ary hatreto dia hitako fa ny KSOffice no mahazo mpampiasa ary mbola hanohy hanao izany satria toa tsara fotsiny izy io ary indraindray mandrodana ireo fiasa fanampiny, amin'izao fotoana izao dia mino aho fa izany no izy hiova ao anatin'ny fotoana fohy.
Misaotra antsika rehetra naneho hevitra, efa nianarako kely avy taminareo tsirairay avy ary manantena aho fa hanohy ity kofehy ity ianareo.
Fiarahabana avy any Caracas, Venezoelà
Mamaly an'i darcloni
arturo garcia dia hoy izy:
Heveriko fa, na dia tsy ny mpampiasa Kingoft Office rehetra aza no vonona hiara-hiasa amin'ilay fandikan-teny (lohahevitra voalohany), ireo izay manao izany dia hanao ny fampiasan'izy ireo "manokana" ilay rindrambaiko ho "ahazoana aina" (izay tsy andoavam-bola) . . . ary vokatr'izany. . . toa fifanakalozana azo ekena ny fiaraha-miasa ho takalon'ny fahazoana rindrambaiko maimaim-poana antenaiko fa tsara. . . (Vao nametraka azy aho)
Mamaly an'i arturo garcia
Benjamin Morales dia hoy izy:
Mariano, miala tsiny fa tsy momba ny lahatsoratra ity fanehoan-kevitra ity fa ... Arzantina ve ianao?
Valiny tamin'i Benjamín Morales
fandikan-teny sasany ho an'ny KingSoft fa ho an'ny Windows .. ??…
Valiny tamin'i Juan Perez
Euclides Gonzalez (Panama) dia hoy izy:
Te hahafantatra aho raha misy tetikasa fandikan-teny fa ho an'ny windows.
Etsy ankilany, tsy mandoa azy ireo koa ny fitsikerana. Ary mandany fotoana fotsiny izy ireo.
Valiny tamin'i Euclides Gonzalez (Panama)
Ing. Armando Ibarra dia hoy izy:
Nandefa azy ireo script bash noforoniny izy hametrahana (raha tsy izany) ny fonosam-birao kingoft ao amin'ny Arch linux na Ubuntu, koa mamokatra zip ao an-tranonao hanova ny fiteny amin'ny Espaniôla
Miarahaba ihany koa noho ity bilaogy ity, satria miresaka momba ny rafitra fiasa GNU / Linux tsara indrindra (raha ny fahitako azy)
Valiny tamin'i Ing. Armando Ibarra
richardelima dia hoy izy:
eny, raha samy miady hevitra ny rehetra dia nanomboka nandika izany tamin'ny fombako, mivantana sy irery .. any no zaraiko!
Mamaly an'i richardelima
gunnar hs dia hoy izy:
Nojereko ny wps ary misy mifanentana tsara amin'ny Microsoft Office, mangataka aminao aho hamoaka avy hatrany fandikan-teny farafaharatsiny mba afaka mampiasa azy avy hatrany ny mpampiasa an'arivony (tena ilaina izany), hampitombo ny lazan'ny wps sy ny fiandrasana ny fandikan-teny feno farany azo omena, fa mba tsy ho lany andro dia ilaina ny mihetsika avy hatrany.
Mamaly an'i gunnar hs
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana ny Biraon'ny WPS amin'ny Espaniôla. Avelako ao anaty rohy ianao.
Salama, azafady noho ny fiovan'ny lohahevitra, fa satria nanavao ny wps ho an'ny kinova 15 aho dia tsy afaka mamono ireo modely an-tserasera hita tany am-piandohana, na tsy hitako ny safidy hanafoanana azy ireo.
Amboary: ny kanelina dia tsy mampihena na mampitombo ny famirapiratana amin'ny Arch Linux